Tranga mampiahiahy tao Sabotsy Namehana «Mpangady lava-drano roalahy matin’ny etona mampidi-doza»
«Etona manempotra mampidi-doza no nahafaty ireo roalahy mpanao lava-drano teo amin’ny fokontany Ambohinaorina, Sabotsy Namehana.». Io no fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana
avy ao amin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena eny an-toerana. “Gaz toxique” mahery vaika izay manempotra avy hatrany no tao an-davaka. Efa ny zoma ireo roalahy ireo no nanatanteraka ny
asany ary efa nahavita hatrany amin’ny 7 m. Nisy angady latsaka tao ary saika haka iny, afak’omaly sabotsy maraina ilay iray voalohany izay nidina kinanjo sempotra. Nidina handeha hanavotra azy ity
faharoa izay torana ihany koa ary maty tsy tra-drano tao. Ilay nidina voalohany, avotry ny mpamonjy voina nantsoin’ny manodidina raha ny vaovao ofisialin’ny zandary hatrany fa nony tonga tany
amin’ny hopitaly dia tsy tana ny ainy.
Voalaza fa nananosarotra ho an’ireo mpamonjy voina ny fakana ireo mpangady lava-drano ireo. Ankoatra ny fahasemporana dia nafana ihany koa tao an-davaka nefa ny andro ririnina. Ny
polisim-pirenena no mandray an-tanana ny tohin’ny raharaha sy ny fanadihadiana ara-tsiantifika ity karazana tranga hafahafa ity izay vao fito metatra ambanin’ny tany monja. Araka ny loharanom-baovao enyan-toerana, miteraka fisavoritahan-tsaina na “psychose” amin’ny mponina manodidina ny fisian’izy io. Misy amin’ireo mponina eo amin’ny manodidina no efa nisintaka ny toeram-ponenany. Eo am-pandaminana kosa ny manampahefana any ifotony. Avy any Ambohimamory, Andramasina moa ireto mpiasa niharam-boina ireto.